News @ M-Media - Page 3649 of 3777 -
ဒီလိုနဲ့ပဲ အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းသားလို့ နာမည်တပ်ဦးမှာလား ….. ။
ပသီဝိုင်းဝတ်ရည်မြင့် သမိုင်းမှန်ကို တကယ်ပဲ မသိကြတာလား၊ နားမလည်ကြတာလား …… ? ကျွန်မတို့အမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပေမယ့်၊ ကိုယ်လက်ခံယုံကြည်တဲ့ ဘာသာတရားကို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်နေတာတွေကိုလည်း တွေ့မြင်နေရတယ်။ စာလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ပြီးအဲဒီစာလေးမှာ ကျွန်မ ရင်ထဲက ခံစားချက်ကို ချရေးလိုက်တော့ စာတစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့[Read More…]
August 14, 2012 — Our Perspectives, ဆောင်းပါး
၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေ ပယ်ဖျက်ရန် အဆို လက်ခံဆွေးနွေးရန် အမျိုးသားလွှတ်တော်သဘောတူ
သြဂုတ်၊ ၁၄၊ ၂၀၁၂ M-Media ရန်ကုန် (သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့)တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ၂၅ ရက်မြောက် အစည်းအဝေး၌ စစ်ကိုင်းတိုင်းကြီး ဒေသ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၇)မှ ဥိးတင်မြက မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဥပဒေကို[Read More…]
August 14, 2012 — မြန်မာသတင်း
မျိုးတင့်သန်း ဟိုတစ်နေ့က ဂျာမန်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဆုံတယ်။ ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ …. လွတ်လပ်စွာပြောဆိုရေးသားခွင့်ခေါင်းစဉ်ရောက်သွားတော့ တစ်ယောက်က ကျနော့ကိုပြောတယ်။ ” မင်းတို့တိုင်းပြည်မှာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအုပ်ချုပ်တုန်းက အခုလို အတန်အသင့်လွတ်လပ်ဖို့မပြောနဲ့ ဘာမှမပြောရဲ မရေးရဲဘူးမဟုတ်လား?” တဲ့။ ကျနော်လည်းစိတ်ထဲဖျင်းကနဲဖြစ်သွားလို့ပက်ကနဲပြန်ပြောလိုက်တယ်။ ” ဟေ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေလက်ထက်တုန်းက[Read More…]
August 14, 2012 — သရော်စာ
ရခိုင်ပဋိပက္ခ OIC လာရောက် လေ့လာမယ်
သြဂုတ်၊ ၁၃ ၊ ၂၀၁၂ ဘီဘီစီ-မြန်မာပိုင်း အိုင်စီလို့ ခေါ်တဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၅၇ နိုင်ငံပါ အစ္စလာမ် နိုင်ငံများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို မကြာခင် လာရောက်ပြီး ရခိုင်[Read More…]
တောင်ကြီးမွတ်စလင်လူငယ်များ ရပ်စောက်အလုပ်စခန်းမှ အကျဉ်းသားများအား အလှူပြု
ဇူလိုင်၊ ၁၉၊ ၂၀၁၂ M-Media ကိုလတ် (တောင်ကြီး) ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်ရှိ ထီးခမ်းစိုက်ပျိုးရေးအလုပ်စခန်းမှ အကျဉ်းသား ၃၀၀ ကျော်ကို တောင်ကြီးမြို့ခံ မွတ်စလင်လူငယ်များတစ်စုမှ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ကျွေးမွေး[Read More…]
Previous 1 … 3,647 3,648 3,649 3,650 3,651 … 3,775 Next